အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ ပွဲ တိုက်ရိုက် (live) - Sa Ka War
AUNG LA N SANG VS. BRANDON VERA – CENTURY PART II တိုကျရိုကျကွညျ့ရနျ
Bantamweight World Championship Bibiano Fernandes vs. Kevin Belingon
Flyweight Muay Thai World Championship Rodtang Jitmuangnon vs. Walter Goncalves
Featherweight Kickboxing World Grand Prix Championship Final Giorgio Petrosyan vs. Samy Sana
MAIN CARD: Heavyweight
#ONEChampionship #AungLaNSang #BrandonVera
ONE ချန်ပီယံရှစ် သိုင်းပေါင်းစုံ အောင်လနဲ့ဗီရာတို့ရဲ့ပွဲက မကြာခင်စတော့မှာဖြစ်ပါတယ် TVဖြင့်ကြည့်ဖို့ မလွယ်သူများ တိုက်ရိုက် liveကြည့်ရန် လင့်ခင်ရှာမတွေ့သူများ ကြည့်ရှုရလွယ်ကူစေရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ONE ချန်ပီယံရှစ် သိုင်းပေါင်းစုံ ရာပြည့်ပွဲ အပိုင်း (၁) ကို အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ တိုကျိုမှာ စတင် ကျင်းပနေရာမှာ ဖယ်သာဝိတ်တန်းမှာ မြန်မာပြည်က ဘူရှီဒို ဖိုးသော်က တောင်ကိုရီးယား ပြိုင်ဘက်နဲ့ ကစားရပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်း အပြင် ဖိုးသော်လည်းပါဝင်တာဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယား ဖိုက်တာ ယွန်ချန်မင် နဲ့ ထိုးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် Skynet Sport 3? HD လိုင်းတွေမှာ ယနေ့နံနက် ၆ နာရီကနေ ၉ နာရခွဲထိပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
MNTV နှင့် MRTV Entertainment မှလည်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ ဒီပွဲတွေရဲ့ အဓိကပွဲဖြစ်တဲ့ အောင်လနဲ့ ဗီရာ ပွဲစဉ်ကိုတော့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီမှာ ထိုးသတ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ပွဲစဉ်အားလုံးကိုတော့ နေ့လည် ၂ နာရီခွဲမှာ စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီး အားပေးစောင့်မျှော်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်းပွဲဟာ မကြာတော့တဲ့ နာရီပိုင်းတွင်းမှာ စတင်တော့မှာဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦးနော်။
One Championship ပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ နှဈ ၁၀၀ ပွညျ့အထိမျးအမှတျအဖွဈ ဂပြနျနိုငျငံ တိုကြိုမွို့မှာရှိတဲ့ Ryogoku kokugikan အားကစားရုံမှ ထိုးပှဲပေါငျး ၂၂ ပှဲပါဝငျတဲ့ ပွိုငျပှဲကွီးကို ကငျြးပမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲကွီးကို အပိုငျး ၂ ပိုငျးခှဲပွီး ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲကွီးမှာ တဈကမျဘာလုံးက စိတျဝငျစားနတေဲ့ အထူးပှဲကွီးကတော့ မွနျမာ့စပါးအုံး အောငျလအနျဆနျနဲ့ ဖိလဈပိုငျ အားကစားသမား ဗီရာတို့ပဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့ ၂ ဦးပှဲကိုတော့ ဒုတိယပိုငျး ခနျြပီယံခါးပတျလုပှဲ အဖွဈ ယှဉျပွိုငျထိုးသတျသှားမှလွညျး ဖွဈပါတယျ။
အောငျလအနျဆနျး အပွငျ ဖိုးသျောလညျးပါဝငျတာဖွဈပွီး တောငျကိုရီးယား ဖိုကျတာ ယှနျခနျြမငျ နဲ့ ထိုးသတျမှာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှ ပရိတျသတျကွီးအတှကျ Skynet Sport 3? HD လိုငျးတှမှော ယနနေံ့နကျ ၆ နာရီကနေ ၉ နာရခှဲထိပွသသှားမှာဖွဈပါတယျ။
MNTV နှငျ့ MRTV Entertainment မှလညျး တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့သှားမှာပါ။ ဒီပှဲတှရေဲ့ အဓိကပှဲဖွဈတဲ့ အောငျလနဲ့ ဗီရာ ပှဲစဉျကိုတော့ မွနျမာစံတျောခြိနျ ညနေ ၅ နာရီမှာ ထိုးသတျနိုငျဖှယျရှိပါတယျ။ အဆိုပါ ပှဲစဉျအားလုံးကိုတော့ နလေ့ညျ ၂ နာရီခှဲမှာ စတငျပါလိမျ့မယျ။
ပရိတျသတျကွီး အားပေးစောငျ့မြှျောနတေဲ့ အောငျလအနျဆနျးပှဲဟာ မကွာတော့တဲ့ နာရီပိုငျးတှငျးမှာ စတငျတော့မှာဖွဈလို့ အားပေးကွပါဦးနျော။
Previous Article ၆ လအတွင်းတရက်မှမနားခဲ့ရဘူးတဲ့…🤭🤭 ဗီရာ ကို ယှဉ်ပြီးထိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့ရပုံတွေကိုပြောပြလာတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း(အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
Next Article ဓာတ်ပုံပဲ ရိုက်ပြီး ပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဝေဠုကျော်